Posted on July 5, 2020 by Qeerroo
Qeerroon Bilisummaa guyyaa artistiin kun wareegame Waxabajjii 29,2020 irraa kan eegale godinoota Oromiyaa mara keessatti bifa qindaayee fi gootummaan guutameen diddaa fi falmaa mirga ummata Oromoo itti fufee jira. Wareegami ol aanaa godinootaa fi magaalota keessatti kafalamaa jira. Mootummaan ta’e jedhee Oromiyaa dirree lolaa fi dirree hokkoraa gochuun akka ummanni tasgabbii hin arganne taasisaa jira. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa gaafatamummaan osoo itti hin dhagahamiin magaalaa fi baadiyyaa keessatti ummata saamuu fi ajjeessuu gara malee dararuu hojii guyyaa godhatee jira. Hidhaan dararaminii fi ummati baqatee bosonatti dheessuun Oromiyaa godina hunda keessa jira. Haalli kun fala dhabuu irraan kan ka’e Qeerroo fi Qarreen Oromoo caasaa bifa dursee diriirfatee lafaa qabuun jijjiiraa hunde qabeessaa fi injifatnoo ummata Oromoo ifatti baasu muldhisuuf falmaa hadhaawaa gochuun magaalota hundatti hanga ammaa Fincilli Xumura Gabrummaa itti fufee jira. Wareegama kana hin jedhamnes baasaa jira.
1. Hogganoota fi miseensota dhaabota karaa nagaa biyya keessatti qabsoofna jedhanii hidhuu;Addattis hogganootaa fi miseensota akkasumas deggertoota ABO fi KFO.
2. Waajjiroota mormitootaa fi qabeenya mormitootaa kan ta’e hunda saamuu;
3. Media lee maqaa Oromoon ijaaraman kan akka OMN, ONN fi Sagalee Qeerroo(SQ) irratti duula banuun akka isaan hin tamsaasne dhorkuu, gaazexessitoota hidhuu;
4. Diddaa Qeerroo Bilisummaa dura dhaabbachuuf jecha magaalotaa fi baadiyyaa keessa waraana afaan fi aadaa Oromoo hin beeknee fi jibba ummata Oromoo irraa qaban jedhanii yaadan naannoolee biroo irraa fidanii Oromiyaa keessa bobbaasuun ummata reebisuu fi ajjeesisuu;
5. Tajaajiloota ummataa kanneen akka ibsaa, bishaan, karaa, geejjiba, kutuu; maneen yaalaa kan dhuunfaa fi mootummaa cufsiisuu;
6. Tajaajjilli Internet guutuu biyyittii keessatti akka cufamuu fi odeessi biyya san keessaa akka hin dhaga’amnee fi hin baane daandii quunamtii hunda hula isaa cufuu;
7. Abbootii amantii, barsiisota, maanguddoota naannoo naannootti kabajamoo ta’an godina Oromiyaa hunda keessaa doorsisuu fi salphisuun hidhaatti guuruu; fi kkf ummata Oromoo irraan gahaa jira.
Muummichi Ministeera Koloneel Abiy Ahmad hatattamaan akka hojii gadi lakkisu. Mootummaan PP yerron aangoosaas waan dhumateef diigamee mootummaan cehumsaa akka ijaaramu.
Hidhaa fi ajjeechaan ummata nagaa irratti raawwataa jiru hatattamaan akka dhaabbatu.
Hoogganoota ol aanoo ABO fi KFO dabalatee hidhamtoonni siyaasaa hatattamaan akka hiikaman.
Humni waraanaa Lixa, Kibbaa fi Kaabaa Oromiyaatti bobbaafamee maqaa WBO sakattaana jedhuun ummata nagaa dararaa jiru hatattamaan Oromiyaa keessaa ba’ee kaampii isaatti akka deebi’u. Nageenyi ummata Oromoo poolisoota dhalootaan Oromoo ta’anii fi amanamummaa ummata Oromoo qaban qofaadhaan akka tikfamu.
WBO sakattaana maqaa jedhuun namoota ajjeefamanii fi qaamaa hir’ataniif hirphi barbaachisu akka kennamu.
Mariin barbaachisaan mormitoota siyaasaa hunda waliin godhamee sagantaan dhaabbataan itti filannoon haqaa fi walaba ta’e akka geggeeffamu.
Sabquunnamtiin ummataa kanneen akka Interneetii, Bilbilaa fi humna ibsaa hatattamaan akka gadi lakkifaman.
Miidiyaaleen ummata walabaan tajaajilan kanneen akka OMN, ONN akka hojii eegalan. Gaazexessitoonni isaani akka gadi lakkifaman. Meeshaaleen waajjira isaaniirraa saamaman akka deebifaman.